गर्भावस्था938 38 39 हप्तामा दोस्रो कमाण्डर225 सिफारिशहरू
अन्तिम चरण बच्चा जन्मनु भन्दा अघि आयो। केहि अन्तिम "कठिनाइहरू" बाँकी छ, र बच्चा शान्तपूर्वक आफ्नो काखमा आराम हुनेछ। गर्भावस्थाको year 99 हप्तामा असुविधा: पेट पेट, दुखाइ तान्न, समय-समय देखि रोकिदै, अंगहरु को लागी। यो सबै चाँडै बन्द हुनेछ। जन्मेको बच्चा, र तपाईं सबै बिर्सनुहुनेछ!
गर्भावस्थाको 39 99 हप्ताको लागि हेर्नुहोस् - बच्चा जन्माउने गर्भवती तपाईंको मार्गनिर्देशन गर्नेहरू थ्रेड बन्नेछन्, तपाईंको शरीरले आफैंलाई बताउनेछ - के गर्ने!
यदि तपाईंसँग र बाहेक, त्यसोभए जान्नुहोस् कि प्रजालित लक्षणहरू मूल महिलासँग समान छन्। यद्यपि, गर्भावस्थाको 39 yearth महिनामा दोस्रो जन्म हुनुको लागि दोस्रो जन्म हुने क्रममा चालको बच्चाको द्रुत गतिको कारण छिटो छ। तपाईंको शरीर पहिले नै "सबै कुरा थाहा छ", पहिलो अनुभवको आधारमा। तपाईंको शरीरलाई विश्वास गर्नुहोस् र सबै ठीक हुन्छ!
<< p> के तपाईंलाई थाहा छ तपाईलाई अब कुन चाहिएको छ? समर्थन। नेटिभ, माया गर्न मन पराउनुहोस्। कहिलेकाँही, एक शब्दले औषधीको सम्पूर्ण शस्त्रागारलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ र चिकित्सकीय सेनाको सम्पूर्ण सेनाको।
तपाईंसँग छ? के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंलाई अहिले तपाईंको बच्चाको लागि के चाहिन्छ? तपाईंको समर्थन! ऊ हतार हतार छ र त्यसैले यस संसारमा आउने प्रयास गर्दछ। उसलाई सहयोग गर। उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्, विश्वस्त गर्नुहोस् कि सबै कुरा ठीकठाक हुनेछ। र तपाईं देख्नुहुनेछ: सबै ठीकठाक हुनेछ!
गर्भावस्थाको 39 year को हप्तामा प्रेन्दिनको जन्म दिनमा मसँग पहिलो छ र मैले अनुभव गरेन, मलाई यो स्पष्ट रूपमा थाहा छैन, तर सायद झगडा गर्छु।
बाट 10 देखि 12-300 सम्ममा तल्लो पछाडि तानियो र त्यसपछि ... लिविस त्यसपछि मलाई पुलिसको लागि पर्खनुभयो, म सीधा र शारीरिक रूपमा गएँ। पूरै हप्ता सोफामा छ, सबै अल्छी थियो, त्यहाँ कुनै सामर्थ्य छैन, निशस्त्री बासिलो रूपमा खानको लागि तयार भएर।
र त्यसैले ... टाटिवियनाले मलाई आज मेरो डाक्टरलाई बोलाउँदछु ... मैले एक रिसेप्शनको लागि सोधें। बच्चा जन्मका लागि नक्शा ल्याए र सम्झौता हस्ताक्षर गरे।
गर्भावस्थाको हप्ता हप्ता फल हप्तामा
फलहरू people weeks हप्तामा फल खबाइयो, आमाको पेल्विसको हड्डीहरूमा थिच्दै। भ्रुणको शिर, धेरै जसो केसहरूमा धेरै जसो मामिलाहरूमा अवस्थित छ। तलदेखि डायफ्रागममा गर्भाशयको दबाब समाप्त भएपछि आमाले सास फेर्नेमा केही राहत महसुस गरे।
नमस्कार। सूचना हेडिंग "सेवाहरू", subwoofter "बच्चा जन्म" मा विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ; ओभरस्टेट्रिक विभाग "। तपाईको सुविधाको लागि हामी लिंक प्रकाशित हो HTTPS:perintantal.pro/perintal-snemeay.pro/peynessea/akusemokagiey/aksuchioky /
नमस्कार। मूल्य सूची "बिरामीहरु" मा हेडिंग "बिरामीहरु" मा संस्था को आधिकारिक वेबसाइट मा प्रकाशित छ।